काभ्रे नेकपा नेता गौतमले सर्वसाधारण ठगेको भन्ने समाचार झूठको पुलिन्दा
यसका पछाडी अरु केही नभई राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गिरोहको काम हो, यस्ता भ्रामक र दोषरोपण समाचार प्रति खेद प्रकट गर्दछु - नेता गौतम ।
बनेपा – नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपाका) काभ्रे जिल्ला नेता अशोक गौतमले आफ्ना बारे भा्रमक समाचार प्रसारण भएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । नेता गौतमले सर्वसाधारण ठग्ने गरेको भन्दै प्रकासन प्रसारण भएका समाचार झूठको पुलिन्दा भएको भन्दै खण्डन गरेका हुन । केही संचार माध्यमले गौतमले विभिन्न घटनामा सर्वसाधरण ठगेको तथ्य सार्वजनिक भन्दै लेखेको समाचार राजनीति प्रतिशोधका आधारमा आएको बताएका छन् ।
नेता गौतमले दुई वर्ष अगाडी भक्तपुरमा भएको टिप्पर दुर्घटनाको बिषय भएको जानकारी दिदैं आफु सो मुद्धा मामिलामा सहजकर्ता र सहयोगको लागी मात्र गएको बताए । यो घटना करिब २ वर्ष अगाडीको हो । टिप्पर दुर्घटना घटनाबारे तेमाल गाउँपालिका,रोशी कटुञ्जे बस्ने इन्द्रबहादुर लामा थुनुवामा पर्नुभएको रहेछ । म राजनीतिक रुपमा सक्रिय मान्छे समाजमा आइपरेका घटनाहरुको समाधान गर्न मध्यस्थता कर्ता मात्र भएको थिए ।
इन्द्रबहादुर थुनामा रहेको बेला उनलाई छुटाउन परिवार र समाजको आग्रहमा मैले मध्यस्थता कर्ताको भूमिका खेले । कानूनी प्रकृयाको लागी अधिवक्ता सुरेश जंग राणा लगायतको टोलीले हेर्नुभएको हो । यसको प्रमुख मध्यस्थतामा उज्जवल लामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुनुन्थ्यो, उहाँकै आग्रहमा म पनि मधयस्थता भएको हुँ, तर आज उज्जवल लामाको निधन पश्चात यो कुरा उठाउने कार्य भयो ।
यसका पछाडी अरु केही नभई राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गिरोहको काम हो । इन्द्रबहादुर, उज्जवल जी जीवित रहँदासम्म के हेरेर बस्नु भएको थियो ? कहाँ हुनुन्थ्यो ? कसले उचालेर उचालिदैं हुनुहुन्छ मलाई जानकारी भएन नेता गौतमले भने । नेता गौतमले यस्ता भ्रामक र दोषरोपण समाचार प्रति खेद प्रकट गरे । उनले राजनीतिमा अगाडी बढेको मान्छेको खुट्टा तान्न र पार्टी विभाजन संधारको मौका छोपी अनर्गल प्रचार गर्ने कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिए ।
उनले भने पार्टी विभाजनको संघारमा छ, यसैको मौका छोपी, यस्ता भ्रामक प्रचार गर्न इन्द्रलाई कसले उचालेको छ ? यीनको इन्टे«स के हो ?त्यो समयक्रमा सँगै पत्ता लाग्ला । इन्द्र बहादुरले लाखौं खाए भन्दै हिडेका छन् रे, कहाँ के मा कति खाएको प्रमाण लिएर आउनुस् । कानूनी पक्रियाको लागी वकिलले मागेको करिब ३ लाख वडा सदस्य इन्द्रमायाको अगाडीनै उज्जवललाई हस्तान्तरण गरेको हुँ । अरु म यस कार्यमा कतै समावेश छैन् । तर ममाथी यस्ता आरोप लगाउनु राजनीति दुराग्रह र झुठका पुलिन्दा हुन’ सत्ता नेकपाकै छ, आफै गृहमन्त्रीको पिए हुँ , प्रधानन्याधिस,महान्यायाधिवक्ता लगायतका आफ्ना मान्छे छन् भन्दै ठग्यो भन्ने जस्ता शब्द राखेर केही संचार माध्यमले पित पत्रकारीता गरेको आरोप समेत लगाए ।
म आजसम्म कसैको पीए पनि भएको छैन कसरी पीए, गृहमन्त्रीको मान्छे भन्दै भ्रामक समाचार लेखिदै छ ? उनले प्रश्न गरे । केही समअघि इन्द्र बहादुर,उज्जवल,अशोक लगाएतका विभिन्न व्यक्तिहरु बसेर यसबारे छलफल भएको छलफलमा यसबारे आफुले कुनै पनि कुरा नभनेको इन्द्रकहादुरले सो छलफलमा बताएको छलपलmमा सहभागी हरुले बताएका छन् । केही महिना अघी उज्जवल लामा जीवितै हुँदा यसबारे कुरा भएको थियो । सो क्रममा इन्द्रबहादुरले यस्तो पैसा आएको केही कुरा आफुले नभनेको आफ्नै कारणले घटना बल्झिन पुगेको स्विकारेका थिए ।
अन्य मिडियामा प्रकाशित समाचारमा रोशी गाउपालिका वडा ७ का महिला सदस्य इन्द्र माया तामाङ पनि देखिएको हुनाले अनलाइन खबर हवले तामाङसंग सो घटनाक्रमको बारेमा जानकारी लिदाँ उनि बताउछिन्– ‘इन्द्र बहादुर तामाङ चौकीमा परेपछि उनको श्रीमती र मैले नै उज्जोल तामाङ र अशोक गौतमलाई सहजीकरणका लागि बोलाएको हुँ ।’ काम गर्ने क्रममा पैसाको पनि लेनदेन भएको हो तर कुन वकिललाई कति र कसरी उहाँहरुले दिनुभयो त्यस विषयमा चाँही आफूलाई थाहा नभएको बताईन् । केही मिडियाले मैले आपतविपतमा परेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्दैगरेको फोटोलाई पैसाको लेनदेनमा जोडेर समचार प्रकाशन गरेको प्रति वडा सदस्य इन्द्रमाया तामाङले खेद व्यक्त गरेकी छन् । उनले थप्दै भनिन्– ‘म एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ, मेरो काम भनेकै अप्ठारोमा परेका दिदीबहिनी तथा दाजुभाईलाई सहयोग गर्नु हो ।’
छलफलमा सहभागी दिपक गौतमले भने अहिले उज्जवल जी वितेपछि यस्तो कुरा बाहिर ल्याइयो, हिजो छलफलमा केही होइन छैन भन्ने आज उज्जवल जी नभएपछि ठग्यो भन्दै गौतमलाई लगाउने कार्य अचम्मको भयो । यसको प्रमुख कारण अशोक नगरपालिका केन्द्रले तोकको ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर लागेको, र राजनीतिमा अगाडी बढ्न थालेपछि उसलाई खुट्टा तान्न कार्यमा भएको छ । त्यस्तै छलफलमा सहभागी अर्का भुवन भनिने जय गौतमले यो बिषयबारे सो छलफलमा टुङ्गीएको कुरा भएको बताए । उनले हिजो छलफलमा सबै क्लियर छ कोही कसैले कसैलाई दोष लगाउने कार्य हुनेछैन भन्ने निर्णय भएको बताए ।
हिजो क्लब तथा गाउँका विभिन्न व्यक्तिहरु बसेर यसबारे टुङ्गीएको थियो, तर आज एक्कासी उज्जवल र अशोकले ठगेको भन्ने समाचार देख्दा हामीलाई आश्चर्य लाग्यो । उनले भने यो राजनितिक प्रतिशोध बाहेक केही होइन,इन्द्र जी कोही न कोहीबाट उच्चादिनु भएको छ ।
छलफलमा सहभागी अनन्त गौतम,यश कुमार लगायतको राय पनि यस बिषयमा टुङ्गीएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार गाउँपालिका सार्ने विषयमा अशोकले राखेको अडान र केन्द्रको निर्णयलाई मान्न तयार नभएका केही राजनितिक प्रतिनिधिहरु र नेकपा नै विभाजन भएको मौकामा नेता गौतमको राजनीतिक भविष्य सकाइदिने तर्फ लागेको कारण यो भ्रमपूर्ण र टुङ्गीएको बिषय अहिले तानिएको हो । यसबारे जानकारी लिन गौतममाथी आरोप लगाउने इन्द्रबहादुर लामालाई फोन सम्मर्क गर्दा उनीसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।